Ugu yaraan 39 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay suuq mashquul badan oo kuyaala Baqdaad - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 39 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay suuq mashquul badan oo kuyaala Baqdaad
January 2, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ugu yaraan 39 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay suuq mashquul badan oo kuyaala Baqdaad. [Sawirka: Iraqi day/ Twitter]
Baqdaad-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 39 qof ayaa lagu dilay 57 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo ka dhacay suuq mashquul badan oo kuyaala caasimada dalka Ciraaq ee Bqdaad gaar ahaan degmada Sadr, sida ay sheegeen booliiska iyo ilo-wareedyo caafimaad.
Qofka is-qarxiyay oo waday gaari ayaa weerar ku qaaday irida hore ee suuq lagu iibiyo khudrada iyo furutka, sida ay sheegeen booliisku.
Ma jirto cid sheegatay masuulida weerarkaas maanta oo Isniin ah balse kooxda Dowlada Islaamiga ah sidoo kale loo yaqaan (ISIS) ayaa badanaa weeraro kan oo kale ah la beegsada meelaha ay joogaan dadka rayidka ah.
Weerarkan ayaa imaanaya labo maalmood kadib markii ugu yaraan 27 qof lagu dilay 57 kalena lagu dhaawacay labo qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada Baqdaad, oo ay masuuliyadiisa sheegatay ISIS.